It is me. Ko Niknayman.: တပြည်လုံးအထွေထွေသပိတ်ကြီးစတင်ကြမည့်အချိန်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၄ ရက်။
တနင်္လာနေ့၊ နေ့လည် (၁) နာရီတိတိ၊
ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူ တပ်မတော်သားအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန်။
Posted by Ko Niknayman at 1:32 AM